HAMRAKHABAR | » फेसबुक ह्याकर बाट कसरी बच्ने? यी कुरा ख्याल गरे बच्न सकिन्छ फेसबुक ह्याकर बाट कसरी बच्ने? यी कुरा ख्याल गरे बच्न सकिन्छ – HAMRAKHABAR
फेसबुक ह्याकर बाट कसरी बच्ने? यी कुरा ख्याल गरे बच्न सकिन्छ
सामान्यतः हामीलाई कसैले फोन नम्बर माग्यो भने बिना हिचकिचाहट निसंकोच दिने गर्छौं। केही काम पर्दा सहयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर।एकजना विश्वासिलो साथीले म्यासेन्जरमा नम्बर माग्नु भयो मैले सहजै दिएँ । केहीछिनमा मलाई म्यासेज आयो …. is your Facebook password reset code भनेर ।उहाँले मलाई फेरि म्यासेन्जरमा सर कुनै म्यासेज आयो? भनेर सोध्नु भयो। मैंले आयो भनिदिएँ। उहाँले के म्यासेज आयो सर भन्नु भयो? मैंले एउटा कोड आएको छ भनें। सर मलाई पठाइदिनु न भन्नु भयो।तर मैले जवाफ फर्काइन ।
पटक पटक म्यासेन्जरमा माग्नु भयो मैले उहाँको म्यासेजको वास्ता गरिनँ। ( यो कोड नम्बर दिन हुन्न। नदिनुहोला । जतिले यसरी मागेको कोड सुरक्षाको ख्याल नगरी वा थाहा नपाई दिनु भयो उहाँको फेसबुक ह्याक भयो ।)उहाँको नम्बर म सँग थियो। मैले पटक पटक फोन गरेँ रिसिभ गर्नु भएन। नम्बर बदल्नु भयो कि भनेर त्यहि म्यासेन्जरमा नम्बर मागेँ दिनु भएन।
यो प्रयास उहाँको र मेरो सम्बन्धको फाइदा उठाई ठगी गर्ने को धन्दा हो। यसरी सजिलै विश्वासमा भएको व्यक्ति बनेर ह्याक गर्दै ठगी गर्ने धन्दा निकै छ।यसरी फेसबुक ह्याक गरेर नजिकका आफन्त र विश्वासिला साथीसँग आफू अफ्ठेरोमा परेको, निकै समस्या परेको बहाना गरेर पैसा माग्ने गर्छन् ह्याकरहरु। ह्याकरहरुले को बाट पैसा माग्दा बिना शंका पैसा पाउन सकिन्छ भनेर मजाले हेक्का राखेका हुन्छन।यसरी ह्याकरले पछिल्लो समय धेरैलाई ठगी गर्दै आइरहेका छन्।
प्राय ह्याकरहरुले पैसा अर्कैको खातामा जम्मा गर्न लगाउँछन्। खाता नम्बर र खातावाल को नाम दिन्छन्। तत्काल मोबाइल बैंकिङ सेवा बाट तत्काल ट्रान्सफर गरेर तपाईं पैसा दिनुहुन्छ।अनि त्यो ह्याकर गायब हुन्छ। उसले खाता बाट पैसा एटीएम मार्फत निकालिसकेका हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा पैसा झिक्न नपाउँदै प्रहरी कहाँ उजुरी पर्छ र प्रहरीको अनुरोधमा बैंकले खाता रोक्का गरिदिन्छ।त्यो खाता बाट अर्को खातामा ह्याकरको ट्रान्सफर गरिसकेको पनि हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रहरीको अनुरोधमा बैंकले खाता रोक्का गर्छ।फेक डकुमेन्ट राखेर खाता खोलेको रहेछ भने खातावाल वा ह्याकरको पहिचान गर्न मुस्किल पर्न सक्छ।त्यसैले यस्ता ठगहरुबाट जोगिन आफ्नो एकाउन्ट मजबूत बनाउनुहोस् ।
तपाईंको एकाउन्ट कसरी सुरक्षित र मजबूत हुन्छ त सो बारे टिप्स लिऔं।
१) नचिनेको Friend request आयो भने accept नगर्ने,
२) Feeling alone, traveling to… जस्ता Information पोस्ट नगर्ने, यसले तपाईंलाई लक्षित गरेको समुहले घटना घटाउन सक्छ।
३) Relationship Status, Credit card details, Own location, Vacation, Families Photo, Children’s School details सकेसम्म सामाजिक सञ्जालमा नराख्नुहोस्,
४) जन्ममिति, नाम/थर, ठेगाना, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट नम्बरलाई प्रयोग गरी कुनै पनि एकाउन्ट को पासवर्ड नराखौं, ह्याकरले सजिलै अनुमान लगाउन सक्छ।
५) फरक – फरक एकाउन्ट को पासवर्ड एउटै नराखौं। एउटा एकाउन्ट ह्याक भयो भने तपाईंका सबै एकाउन्ट ह्याक हुन सक्छन्।
६)कुनैपनि Password कसैलाई कहिलै नदिउँ। दुस्मन बाट सुरक्षित राख्नु छ भने मित्र बाट पनि सुरक्षित राख्नु पर्छ ।
७) Password कहीं कतै सेभ गरेर, लेखेर वा फोटो खिचेर नराखौं। यो सम्झेर याद गर्दा मात्र सुरक्षित हुन्छ ।
८) Password बलियो बनाउन 8 Character हुन जरुरी छ। त्यसमा Capital Letter (HTD), Small Letter (nbre) , Number digit (3864), Symbols (#@&%$) जस्ता Characters प्रयोग गरेर बनाएको Password ह्याकरहरुले अनुमान लगाउन सक्दैनन्।
९)चिर परिचित वा अपरिचित जो सुकै व्यक्तिले तपाईंको फोन नम्बर म्यासेन्जर मार्फत माग्यो भने नदिनु। उसलाई कल गर्नु। फोन नम्बर माग्ने मान्छे कोहो कन्फर्म गर्नु। यकिन नगरी फोन नम्बर नदिनु ।
१०) फोन नम्बर सकेसम्म फेसबुकमा नराख्नु।
११) फोन नम्बर कतै बाट पाएर तपाईंको फेसबुकको Password change गर्न सक्छ। त्यसको लागि तपाईंको मोबाइल नम्बरमा एउटा Code आउँछ। तपाईंलाई म्यासेन्जरमा नम्बर माग्ने ले अब त्यो code पनि माग्छ। यो Code कसैलाई नदिनु। यो Code पायो भने तपाईंको फेसबुक ह्याक हुन्छ। र तपाईंको आफन्तलाई तपाईंको फेसबुक मार्फत पैसा मागेर ठगी गर्छ।
यो Code दिने जतिको Facebook ह्याक भएको छ, ठगिनु भएको छ।
१२) तपाईंलाई ईमेल मार्फत, फोन मार्फत वा फेसबुक मार्फत कोही कसैले ठूलो धनरासी को चिठ्ठा परेको छ भनेर विश्वास दिलाएर केही रकम आवश्यक पर्ने भन्दै माग गर्ला, होसियार हुनुहोस् त्यो पनि ठगीको अर्को रूप हो।
१३) कुनै पनि Unauthorized link क्लिक नगर्नुहोला, तपाईंको प्रोफाईल क कसले हेर्नुभयो जान्नुहोस् जस्ता लिंकले पनि तपाईंको गोपनीयता भङ्ग गरिदिन सक्छ।
१४) Unauthorized mail पनि नखोल्नु होला। त्यहाँ बाट पनि तपाईंको डेटा चोरी हुन सक्छ।
१५) यस्ता कुनै पनि घटना भए गरेको थाहा वा जानकारी पाउनु भयो भने नजिकको प्रहरी कार्यालय वा प्रहरीको 100 नम्बरमा तुरुन्त संपर्क गर्नुहोला।
१६) तपाईंले त थाहा पाउनु भयो अब आफन्त र साथीलाई पनि जानकारी दिउँ है? त्यसो भए सेर गर्नुहोस् न ल ।
लेखक लक्ष्मण ओली नेपाली प्रहरीका प्रहरी निरिक्षक हुनुहुन्छ